အိမ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အိမ်
Posted by Mr. MarGa on Apr 21, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., Relationships & Family | 58 comments
“အိမ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးဟာ တစ်လုံးတည်းနဲ့ များပြားလှတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်နေသလိုပဲ။
အိမ်တွေကို အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုရင် သစ်တစ်ပင် ဝါးတစ်ပင်အောက်ကစလို့ တိုက်ကြီးတာကြီးအလယ် စံအိမ် ရဲတိုက်တွေ အဆုံး အကုန်လုံးကို အိမ် ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ ထည့်နိုင်တယ်။
လူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်ကိုကြည့်လို့ ဒီလူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်းကို ခန့်မှန်းကြသလို တစ်ချို့ကျပြန်တော့ သူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းပေါ်မူတည်လို့ နေထိုင်ဖို့ အိမ်ကို ရွေးချယ်တတ်ကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ရွေးချယ်ကြပါစေ လူအများစုကတော့ နေထိုင်တဲ့အိမ်ကို ကြည့်လို့ အဆင့်အတန်းကို ဆန်းစစ်ကြတာပဲမဟုတ်လား။
ဒီတော့ အိမ်ကို ဂုဏ်တွေ ပကာသနတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းထားကြသူတွေကလဲ အများစုပါ။
အိမ်တစ်အိမ်အတွက် သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလဲ အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။
စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲက တောအုပ်လေးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းလို့ စိမ်းစိုသာယာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ အိမ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ တိုက်တာတွေအလယ်က ကားတဝီဝီ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လမ်းမကြီးရဲ့ ဘေးကအိမ်ကလေးရဲ့ သာယာမှုတော့ မတူနိုင်ဘူးပေါ့။
ဒီ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာမှုအပေါ်မှာ မူတည်လို့လဲ အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို တိုင်းတာတတ်ကြပါသေးတယ်။
နောက်ထပ် တိုင်းတာတဲ့ အဆင့်အတန်း တစ်ခုကတော့ သူနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းပါ။
အိမ်တစ်အိမ်ဟာ သွားရေးလာရေး လွယ်ကူရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေ ပြည့်စုံရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုး မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လူသားတွေ နေထိုင်ဖို့၊ သဘာဝဘေးဒဏ် ကာကွယ်ဖို့၊ လုံခြုံစေဖို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းတွေပေါ့လေ။
အများစုက အဲဒီ အဆင့်အတန်းတွေကို ကြည့်လို့ ဒီအိမ်ဟာ နေချင်စဖွယ် ကောင်း၊မကောင်းကို သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ဒီလို တိုင်းတာကြသူတွေရှိသလို နွေးထွေးကြင်နာမှု၊ မေတ္တာတရား စတာတွေနဲ့ သတ်မှတ်ကြသူတွေကလဲ မနည်းပါဘူး
အပေါ်က ကျွန်တော် စ ပြောခဲ့တဲ့ အရာတွေကတော့ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက်တွေလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။
နောက်ဆုံး ပြောခဲ့တဲ့ အရာကတော့ ရွေးချယ်လို့ မရတဲ့ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ယူလို့ မရတဲ့ အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို အဲဒီက ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ နွေးထွေးကြင်နာမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ လုံခြုံမှု၊ နားလည်ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့သာ တိုင်းတာချင်ပါတယ်။
အိမ်နဲ့တူသော အိမ်ဖြစ်ဖို့ ဒီအချက်တွေနဲ့သာ တိုင်းတာသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ အဲဒီ နားလည်ဂရုစိုက်မှု၊ နွေးထွေးကြင်နာမှုတွေဟာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ ပါဝင်လာမယ့် အရာတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။
အဲဒီ အချက်တွေက အိမ်သားတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအပေါ် ကူညီစောင့်ရှောက် ဖေးမမှုတွေကြောင့်သာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေကိုး။
ဒါပေမင့် တစ်ထစ်ချ ပြောရဲတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အဲဒီ အချက်တွေသာ ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင် အိမ်တစ်အိမ်ဟာ နေချင်စဖွယ်ကောင်းပြီ၊ အိမ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီ ဆိုတာပါပဲ။
အိမ်တစ်အိမ်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ တန်ဖိုးကြီးမြင့်နေပါစေ အိမ်သားတတွေက လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းလို့ အငြိုးအတေး၊ အာဃာတတွေ ထားနေကြမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီအိမ်ကို နေချင်စဖွယ်လို့ မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။ သတ်လဲ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုအိမ်မျိုးကို အိမ်မဟုတ်သော အိမ်လို့သာ ပြောချင်တော့တယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီအိမ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အိမ်သူအိမ်သားတွေကသာ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဆင့်အတန်း ကို သတ်မှတ်ကြသူတွေပဲလေ။
အိမ်သူအိမ်သားတွေ အပေါ်မှာ မူတည်လို့ အိမ်တစ်အိမ်ဟာ သာယာပြီးတော့ နေချင်စဖွယ် ဖြစ်နိုင်သလို သူတို့ကြောင့်လဲ အိမ်နဲ့ ဝေးရာကို ထွက်ခွာရတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။
ဒါကြောင့်မို့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်၊ အဆင့်အတန်း ဆိုတာတွေဟာ နေထိုင်တဲ့ အိမ်သူအိမ်သားတွေ အပေါ်မှာသာ မူတည်တယ်လို့ ပြောချင်မိတယ်။
အိမ်သူအိမ်သားတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မေတ္တာ၊ အကြင်နာတွေနဲ့ ဖေးဖေးမမ ကူကူညီညီ ရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအိမ်မျိုး ဖြစ်နေပါစေ သူတို့အတွက်တော့ သာယာနွေးထွေးမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လုံခြုံမှုတွေကို ရရှိနေမှာ သေချာပါတယ်။
ပြောရင်းပြောရင်း အိမ်ကနေ မိသားစုဆိုတဲ့ ဘက်ကို နည်းနည်း ရောက်သွားတယ်ထင်တယ်။
အင်းပေါ့လေ အိမ်တစ်အိမ်မှာ အတူတူ နေထိုင်သူတွေကို မိသားစုလို့ အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်နိုင်သကိုးဗျ။
ကျွန်တော့် အယူအဆ ကတော့ မိသားစုတစ်စု ဖြစ်နေဖို့အတွက် ဆွေမျိုးတော်တယ်၊ မတော်ဘူးဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့ နေရာမှာ မပါဘူးလို့ပဲ ပြောချင်မိတယ်။
မိသားစုတစ်စု စတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် သူစိမ်းနှစ်ဦးကပဲ စတင်ခဲ့ရတာမဟုတ်လား။
သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။
သူတို့သည် ဆွေမျိုးတော်ချင်တော်မယ်၊ မတော်ချင်မတော်ဘူး ဒီအချက်ကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အရေးမပါတော့ဘူးပေါ့။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တဲ့ မိသားစုဟာ သွေးသားတော်စပ်မှု ရှိချင်မှ ရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင် အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ပြီ။ အဲဒီ မိသားစု နေထိုင်တဲ့ နေရာကိုလဲ အိမ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီ ဆိုတာပါပဲ။
ဒါ့အပြင် အဲဒီအိမ်ဟာလဲ နေချင်စဖွယ် သာယာမှု ရှိမယ်ဆိုတာကို သေချာပေါက် ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ အိမ်နဲ့တူတဲ့ အိမ်ကလေးတွေမှာ နေထိုင်ကြပါစို့လားဗျာ။
home different from building
without loves, there is nothing
father is something
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံး မန့်လိုက်လို့ ကျေးကျေးပါ လို့ :hee:
1) Having somewhere to go is “HOME”
Having someone to love is “FAMILY”
Having both isa“BLESSING”
2) A HOUSE is made of “Bricks and Beams”
A HOME is made of “Hopes and Dreams”
ဒါက ခီညား အုန်းကျူး လားဗျ
No, it is not.. I heard/read it before.. I do not remember the source. Maybe we can google it.. .. Sorry, I can not type MM font ..
ဂျီးဒေါ်ဆွိ အဲလောက် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမှန်း
မြန်မာဖောင့်နဲ့ မရိုက်နိုင်တာတောင်မှ လာပြီး မန့်တာ တကယ် လေးစားပါတယ်ဗျာ :hee:
ံHome Sick ဖြစ်နေလေရဲ့။
အားပေး စကားလေးတွေ.. (မပြောတတ်ပြောတတ်နဲ့) ပြောနေရတယ် ။
ဦးမာဃလဲ အဲသလို ပြောနေရပါသကွယ် :hee:
အိမ်ဆိုတာက အမိုးရယ် အကာရယ် အခင်းရယ် ကြားထဲက အရာတဲ့……။ အံဇာဒုံးရဲ့ ဆြာကြီးပြောသွားတာ …..။ ခုတော့သူလည်းဒိုး………ရှာလေပြီ
အံဇာဒုံးရဲ့ ဆြာကြီး ဆိုတော့ နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားမိတယ်
ဂျာ .. ခညာ …
တား ဂို ခေါ်ဒါလားရို့ …
ဘယ်ချောင်က ထွက်လာပါလိမ့် :om:
ကျုပ်တို့ မိသားစုအိမ်တွင်ရေးဟာလည်း အဖုအထစ်လေးတွေတော်တော်များများနဲ့
တည်ဆောက်ထားသမို့ ဒီပို့စ်လေးကို ကူးယူထားလိုက်သဗျာ…………………..
ရေးသူအမည်ထည့်လို့ ဘယ်နေရာမှာမဆို သုံးနိုင်ပါကြောင်း………ရယ် :hee:
ဟုတ်ပါတယ် တဂျားမင်းရေ။ home နဲ့ house ကြားမှာ အများကြီးခြားနားပါတယ်။ သူစိမ်းတွေနဲ့ ကြားမှာတော့ အမိုးအကာရှိပေမဲ့သူက house ဖြစ်နေပြီး သွေးတော်တော် မတော်တော် နွေးထွေးမှု့တွေနဲ့ မိသားစုလို အေးချမ်းနေတဲ့နေရာကတော့ home ပဲပေါ့နော။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မအိမ်လေးကို home ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားနေတာမို့ ဒီပိုစ့်ကလေးကို အပြည့်အ၀လက်မထောင်သွားပါအိ။
နွေးထွေးတဲ့ အိမ်ကလေးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသဗျ :hee:
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အငြိုးအတေး၊ အာဃာတတွေကင်းမဲ့တဲ့ နွေးထွေးတဲ့နေချင့်စဖွယ် အိမ်လေးတစ်လုံး ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ…..
ဖြစ်ချင်ပါက အခုစ၍ ပြုမူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း
စိတ်သာ အဓိက ဖြစ်သည်ဟု ပြောချင်ပါကြောင်း :hee:
သူ့ဟာသူ နေတဲ့ အိမ်ကလေးကို ဘယ်က ဗုံးနဲ့ လာပစ်ရသတုန်း
အဲဒီလို သေချာဖတ်လို့ လက်မလေး ထောင်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ :hee:
ဟဲ့ ငါကတော့အ်ိမ်မှာနေဘူး အိုက်ဒါဘာဖြစ်တုန်းးးး (အိမ်ကို ရွေးခြယ်တတ်ကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ရွေးခြယ်ကြပါစေ ) တွေ့လား အိုက်ဒီစာကြောင်းတွေမှာ စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ် သေချာမရေးဘူး ငါရိုက်ထည့်လိုက်ရနာတော့မယ် ငါ့တပည့်မဟုတ်တာကျနေဒါဘဲ ဖျင်းလိုက်တဲ့သဂျား နုံလိုက်တဲ့သဂျား ( (ဟွင်း ဟွင်း အရသာရှိထှာ နောက်တစ်ခါ မှားရဲရင် မှားပေါ့ ) :harr:
ဒီ ဗုံတစ်လုံးကတော့ လုပ်ပြီ
သေချာပြန်ဖတ်ဦး ဘယ်နားမှာ မှားတာလဲဆိုတာ
အိမ်မှာမနေရင်လဲ နေတဲ့နေရာမှာ အိမ်နဲ့တူအောင် လုပ်ဆောင်ရုံပေါ့ဗျာ
အိမ်ပြန်မယ်… ကိုယ့်အတွက်ရှိရဲ့လား… အို… အိမ်လေးတစ်ခုပါကွယ်…
ဒီသီချင်းလေးက သိပ်ပြီးတော့လူသိမများပေမယ့် ကိုညီထွဋ်ရဲ့ အိမ်ဆိုတဲ့သီချင်းပါ…
အပြင်ကပြန်လာလို့ မှောင်ထဲမှာ ဖုန်းကိုထုတ်… ဓာတ်မီးလေးဖွင့်လို့
အဲဒီလိုပဲ… အိမ်ပြန်လာမယ့်သူကို မီးဖွင့်ပြီးထိုင်စောင့်ပေးမယ့်သူရှိတဲ့သူတွေလဲ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်… အိမ်ဟာ… ဘ၀အတွက် နားခိုဖို့နားနေရာတစ်ခုပါ…
ဒီလိုမျိုးအတွေးအမြင်လေးနဲ့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကဖက်ကပ် ပြောသလိုပဲ ပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်
( လူသားတိုင်း ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်ယာ နဲ့ ပိုင်ဆိုင်နေနိုင်ကြပါစေ၊
မရှိသေးသူများ တန်ခိုးပြည့်စုံတဲ့ ဦမာဃ ဆိုသော သိကြားမင်းကြီးစီမှာ တောင်းစေဗျ…..)
သိကြားမင်းကြီးမှာ အလွန့်အလွန်ပင် ပေးချင်လှပါသည်။
ဘာစီမံကိန်း၊ ညာစီမံကိန်း ပေါ်လာ၍သော်လည်းကောင်း
ကျူးကျော် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလာလျှင်သော်လည်းကောင်း
ဦးမာဃနှင့် မဆိုင် ……………….
တကယ်တော့ အမေ့အိမ် ဆိုတာ အဖေ့ခြံထဲမှာ ဆောက်ထားတာပါဗျာ..
အမေ့ခြံထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ အဖေ့အိမ်ကိုကျ ဘယ်လိုပြောမလဲ ဂီဂီ :hee:
အိမ်ပြန်ချင်တယ် .. ဟူး .. ဟူး.. အနွေးထွေးဆုံးအမေ့အိမ်.. ဆိုပေမယ့်လည်း . . အဖေ၊ အမေ.. အစ်ကို အစ်မ.. မောင် အားလုံး ရှိတဲ့အချိန် ကဖြင့် လူကလေး အတွက် အနွေးထွေးဆုံး အိမ်တစ်လုံး… ပါရို့..
ဒါဆို လူကလေးက အခုလက်ရှိ နေထိုင်နေတဲ့ နေရာကိုတော့ နွေးထွေးတဲ့အိမ်လို့ မပြောချင်ဘူးပေါ့လေ
အင်း .. ဆိုပါဒေါ့ကွယ်..
သူတို့ ကတော့ဖြင့် အိမ်ထောင်တွေကျလို့ ..သူတို့ မိန်းမလေးတွေ .. ယောကျာ်းလေးတွေကို ကြင်နာလို့ .. ငါ့ကိုတော့ မေ့လို့.. ဟွင်း… လေဒယ်
ကွယ်ရင် လွမ်း တွေ့တော့ အသေသတ် ဆိုတာ…………..
ဒါပေမင့် အရေးကြီးရင် သွေးနီးကြပါတယ်
….. ဟမ်းးးး ……
အများစု မှန်တယ် …
ဒါပေမယ့် အနည်းစုအတွက် မှားတယ် …
ရာဇဝင် .. အဲ .. မဟုတ်သေးဘူး .. ဘုရားဟော ဇာတ်ဝတ္ထု ပဲ ဆိုပါတော့ …
ဒါနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ …
မိသားစုတစ်စု စတင် ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်
သူစိမ်း နှစ်ဦး ကပဲ စတင်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိရတယ် ..
သာကီမျိုး ဆိုတာကို ကြည့်ပေါ့ ….။
အိမ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ …
တို့များ ဇာတိရပ်မြေ အမေ့ရဲ့ အိမ်ကိုသာ သိသကွယ် …
အိမ်တကာ့ အိမ်ထဲ ဘယ်အိမ်ကြီး ဘယ်အိမ်သေး ကိုမှ
အမေ့အိမ်လောက် နေလို့ မကောင်းလှဘူး ….
ပြောရင်း ဆိုရင်း .. အမေ့အိမ်ကို လွမ်းတွားဘီ …
အမေ့နဲ့ ရွာကို သားမောင် လွမ်းတယ် အမေရယ် ..
အော် ငိုပလိုက်ဂျင်ဒယ် … ဗျဲ …
အဲဒီ သာကီမျိုးဖြစ်ဖို့ ဘယ်သူတွေက စသလဲ
အမေ့အိမ်ကို နင်အခု နေတဲ့ဆီ ရွှေ့လိုက်
ဟဲ့ .. သာကီမျိုးဖြစ်ဖို့ စဒါ လာမမေးနဲ့ …
ဘဲဥ အစ ရှာလို့ ရမားးး
ဒါနဲ့ နင်သိအောင် ထပ်ပေါလိုက်ရအုံးမယ် ..
ပဒိသန်ဒေ နေဒါ အညိုးညိုး ချိဒယ် …
သစ်ပင် ဂတောင် မွေးဒေးဒါ …
အထီးအမတောင် လိုဝူး ..
နင့်ကို ကစ်ထည့်လိုက်ရင် စိတ်ဓါတ်တွေ အတုန်းအရုန်း ကျတွားမှာစိုးညို့ မကစ်ဒေါ့ဘာဘူးလေ .. ငွင်း ငွင်းးး
ပဒိသန်ဒေ နေတာ အညိုးညိုး ချိဒယ်ဆိုရင်……
သေချာသွားပြီလေ ထွက်လာတဲ့ဟာဒွေက မောင်နှမ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ
ဒါကို ဘာ ကစ်ချင်သေးတာတုန်း :om:
ဘာမှ ကစ်ဂျင်ဒေါ့ဘာဝူး သဂျားရယ် …
နာ့ ဒူးဂေါင်းနဲ့ ပြေးကစ်လိုက်ဂျင်ဒေါ့ဒယ် .. ဟီဟိ ..
နင့် ဒူးခေါင်း ပြုတ်သွားမနော်…….
မတူရင် မတုနဲ့…..ကွယ့် :hee:
နာဂ နင့်လို ဒူးမချောင်ဘူး …
နာ့ဒူးက ကောင်းဒယ် .. ဗျဲ …
မတူရင် မတုနဲ့ ဆိုဒါ နာဂ ပေါရမှာ ..
နာဂ ဗြဟ္မာ .. နင်ဂ သဂျား ..
နာ့ထက် အဆင့်နိမ့်ဒယ် .. ဗျဲ …
နင်တို့ ဗြဟ္မာတွေက အလကား
နင်တို့ဟာနဲ့ နင်တို့တောင်မှ စိတ်နဲ့ရုပ် ကွဲနေတဲ့ဟာတွေ
ဗြဟ္မာဆိုဒါ မေတ္တာ ဂလုနာ ထားရဒယ် ..
ပေါဂျင်ဒါ ပေါဘာစေဒေါ့လေ …
ဒီသဂျားလေး မကျန်းမာဘာစေ၊ မချမ်းဒါဘာစေ …
ကိုယ်ဆင်းရဲ မကင်းဘာစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲ မကင်းဘာစေ …
အည .. အည .. အည ..
သာဒု .. သာဒု .. သာဒု ….
မင်း ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့်
ကျန်းမာ ချမ်းသာ လန်းဖြာသကွယ်
(လန်းဖြာတာ ဘာလဲတော့ လာမမေးနဲ့ )
ဗြဟ္မာလေးက ဒီလိုကျတော့လဲ သိကြားကို ရိုသေသားပဲ
သဂျား အရူး …
အရူး သဂျား …
အာ … ဘလိုင်းဂျီး ဆော်မိတွားဘီ …
ဘွာတေး ….. နော် ….
နောက်ဆုံးတော့ ဇာတိ ပေါ်တာပဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နာ့ပို့စ် ကွန်းမန့် ငါးဆယ်ပြည့်ပြီ
နာလဲ နင့်ဆီကနေ တစ်ခု နှစ်ကျပ်နဲ့ တော်တော်ရသွားပြီ
နင်လဲ တန်တွားဘီ …
နာလည်း နင်နဲ့ ရင်ဖြစ်ရဒါ မောတွားဘီ …
ဟောဟဲ .. ဟောဟဲ … ဘူ …
(( အန် .. အီး ထွက်တွားဒယ် ))
ဒါပြီးရင် နောက်နေ့ သူကလေးနဲ့သာ ရှင်းကြစို့
ဟီးးးးး ဟုတ်ဒယ် …
နာလည်း သူဂလေး ပို့စ်မှာ ထပ်ပီး ပေါရဲဒေါ့ဝူးး
ဟိုက ကြိုက်မှန်း မသိ၊ မကြိုက်မှန်း မသိနဲ့
တော်ကြာနေ စိတ်ဆိုးသွားမှာလည်း စိုးရသေးတယ် ..
စိတ်ဆိုးတော့လည်း တောင်းပန်လိုက်ကြတာပေါ့ကွာ …. နော့ …
အိမ် ဆိုတာနဲ့ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုထက် သက်ရှိလူသားတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ မိသားစုလေးပါပါမှ ပြည့်စုံတယ်လေ။
အဲဒီ မိသားစုလေးပါလာလို့လည်း အိမ်ဆိုတာ နွေးထွေးခြင်းတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ အကြင်နာ ဂရုဏာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်ပြီး နေချင်စရာကောင်းလာတယ်။ :hee:
သက်မဲ့ကို အသက်ဝင်အောင် လုပ်ပေးတာကတော့ အဲဒီ မိသားစုလေးပဲပေါ့ :hee:
အိမ် အိမ် နဲ့ တစ်အိမ် ထဲအိမ်နေကြတဲ့သူတွေ အတွက် တစ်ခေတ်က နာမယ်ကျော်ခဲ့တဲ့ စာဆိုနောင်ရဲ့ ကဗျာလေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်….။ ကဗျာခေါင်းစဉ်က “အိမ် ” တဲ့
ကဗျာလေးနဲ့ လာကာအားဖြည့်ပေးတဲ့ အဘနီကိုလဲ ကျေးဇူးပါ လို့ :hee:
လူများများ လာဖတ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်တာပေါ့ :hee:
တစ်ခုကို ပျှမ်းမျှ နှစ်ခုနှုန်း ပေးနိုင်တဲ့ ဇွဲကို ချီးကျူးပါတယ်